Imbali yeCawa yamaRoma Katolika
Ukubukela ukuqala kweeNcinci zamasebe adala kunazo zonke zobuKristu
Ibandla lamaRoma Katolika eliseVatican kwaye liholwa nguPapa, likhulu kunabo bonke amasebe obuKristu, kunye nabalandeli abayi-1.3 billion emhlabeni jikelele. NgamaKristu amnye amaKristu ngamaRoma Katolika, kunye nomntu oyedwa kwaba sixhenxe emhlabeni jikelele. EUnited States, malunga neepesenti ezingama-22 zoluntu zichonga uKatolika njengenkolo yabo ekhethiweyo.
Imvelaphi yeCawa yamaRoma Katolika
IRoma yamaKatolika ngokwayo igxininisa ukuba iSonto lamaRoma Katolika lasungulwa nguKristu xa wayinika umyalelo kuMpostile uPetros njengentloko yecawa.
Le nkolelo isekelwe kuMateyu 16:18, xa uYesu Kristu wathi kuPetros:
"Ndiya kukuxelela ukuba unguPetros, kwaye kule ngxondorha ndiya kuyakha ibandla lam, kwaye amasango eHayidesi akayi kunqoba." (NIV) .
Ngokutsho kwe -Moody Handbook of Theology , isiqalo esisemthethweni secawa yamaRoma Katolika safika ngo-590 CE, kunye noPapa Gregory I. Eli xesha laphawula ukuhlanganiswa kwamazwe alawulwa igunya likapapapa, ngoko ke amandla ecawa, ekuya kuthiwa kamva kuthiwa " ngamaPapa ."
Icawa yamaKristu yokuqala
Emva kokunyuka kukaYesu Kristu , njengoko abapostile baqala ukusasaza iindaba ezilungileyo baze benze abafundi, banikezela isakhiwo sokuqala seCawa yamaKristu yokuqala. Kunzima, ukuba akunakwenzeka, ukwahlula amanyathelo okuqala ecawa yamaRoma Katolika ukusuka kwicawa yokuqala yamaKristu.
USimon Petros, omnye wabafundi bakaYesu abali-12, waba ngumkhokeli onamandla kumbutho wamaKristu.
Kamva uYakobi, mhlawumbi umntakwabo kaYesu, wathatha inkokheli. Aba balandeli bakaKristu babezijonga njengento yokuguqula ubuYuda, kodwa baqhubeka belandela imithetho emininzi yamaYuda.
Ngeli xesha, uSawule, ekuqaleni wayengomnye onamandla kuntshutshiso wamaKristu akuqala angamaYuda, wayenobuboni bukaYesu Kristu endleleni eya eDamasko waza waba ngumKristu.
Ebizwa ngokuba nguPawulos, waba ngumvangeli omkhulu kwicawa yokuqala yamaKristu. Ubulungiseleli bukaPawulos, obizwa ngokuba yiPauline Christianity, bujoliswe ikakhulu kwiintlanga. Ngeendlela ezifihlakeleyo, icawa yokuqala yayiye yahlukana.
Olunye uhlobo lwenkolelo ngeli xesha libuKristu lobuGnostic , obufundisa ukuba uYesu wayengumoya, othunyelwa nguThixo ukuba anike ulwazi kubantu ukuze babalekele iintlungu zobomi emhlabeni.
Ukongeza kwi-Gnostic, yamaYuda, kunye nobuKristu be-Pauline, ezinye iinguqulelo zobuKristu zaziqala ukufundiswa. Emva kokuwa kweYerusalem ngo-70 AD, intshukumo yamaKristu yahlakazeka. UbuKristu bePauline neGnostic basala njengamaqela aphezulu.
Ubukhosi baseRoma babuqonda ngokusemthethweni ubuKristu bukaPawulos njengenkolo efanelekileyo ngo-313 AD. Kamva kule nkulungwane, ngo-380 AD, ubuKatolika bamaRoma baba yinkolo esemthethweni yoBukumkani baseRoma. Ngethuba leminyaka eli-1000 elandelayo, amaKatolika ayenaye kuphela abantu ababizwa ngokuba ngamaKristu.
Ngo-1054 AD, ukuhlukana okusemthethweni kwenzeka phakathi kwamaKatolika aseRoma kunye ne- Eastern Orthodox . Eli sahlulo sisasebenza namhlanje.
Icandelo elilandelayo eliphambili lenzeke ngekhulu le-16 kunye neNguqulelo yamaProthestani .
Abo bahlala bethembekile kwi-Roma yamaKatolika bakholelwa ukuba umgaqo-siseko wemfundiso yeenkokeli zebandla kwakuyimfuneko ukukhusela ukudideka kunye nokwahlukana phakathi kwecawa kunye nenkohlakalo yeenkolelo zawo.
Iimviwo ezibalulekileyo kunye neZenzo kwiMbali yamaRoma Katolika
c. 33 ukuya ku-100 CE: Eli xesha liyaziwa njengexesha lobupostile, ngeli xesha ibandla lokuqala laliye laphakanyiswa ngabapostile aba-12 bakaYesu, abaqala umsebenzi wezithunywa zevangeli ukuguqula amaKristu kumaKristu kwimimandla eyahlukeneyo yaseMedithera naseMideast.
c. 60 CE : Umpostile uPawulos ubuyela eRoma emva kokutshutshiswa ngenxa yokuzama ukuguqula amaYuda kumaKristu. Kuthiwa usebenze noPetros. Idumela laseRoma njengeziko lecawa lobuKristu linokuqala ekuqaleni kweli xesha, nangona izinto zenziwa ngendlela efihlekileyo ngenxa yokuchaswa kwamaRoma.
UPawulos uyafa malunga ne-68 CE, mhlawumbi ebulawa ngokubethelwa ngu-Emperor Nero. Umpostile uPetros ubethelelwe esiphambanweni ngelo xesha.
I-100 CE ukuya ku-325 CE : Eyaziwayo njengexesha le-Ante-Nicene (phambi kweBhunga likaNicene), eli xesha laphawula ukwahlukana okunamandla kwecawa yobuKristu esanda kuzalelwa kwiinkcubeko zamaYuda, kunye nokusasazeka kobuKristu kwintshona yeYurophu, Ummandla waseMeditera, kunye neMpuma kufuphi.
Ngama-200 CE: Ngaphantsi kobunkokheli bukaIrenaeus, umbhishophu waseLyon, isakhiwo esisiseko secawa yamaKatolika sasisendaweni. Inkqubo yokulawulwa kwamasebe esithili ngaphantsi kweso sakhiwo esivela eRoma yasungulwa. Abaqashi basisiseko baseKatolika babekwa ngokusemthethweni, kuquka ukulawulwa ngokupheleleyo kokholo.
313 CE: Umlawuli waseRoma uConstantine wasemthethweni ubuKristu, kwaye ngo-330 wathumela umninzi waseRoma eConstantinople, eshiya ibandla lobuKristu libe ligunya elikhulu eRoma.
325 CE: IBhunga lokuQala laseNicaea lidibaniswa nguMlawuli waseRoma uConstantine I. IBhunga lizama ukuseka ubukhokeli becawa malunga nomzekelo ofanayo kunye neenkqubo zaseRoma, kunye nokwenza amacandelo anokholo.
551 CE: KwiBhunga likaCalcedon, intloko yecawa yaseConstantinople yaxelwa ukuba yintloko yeSebe laseMpuma yecawa, elilingana negunya kuPapa. Oku ngokuphumelelayo kwakuqala ukuhlula kwecawa kwii-Eastern Orthodox naseRoma.
590 CE: UPapa uGregory Ndiqalisa upapa lwakhe, apho iSonto LamaKatolika lenza imizamo eguqukeleyo yokuguqula izizwe zobuhedeni ukuya kwiKatolika.
Oku kuqala ixesha lepolitiki enkulu nempi elawulwa ngabapapa bamaKatolika. Lo mhla ukhankanywe ngabanye njengokuqala kweCawa yamaKatolika njengoko siyazi namhlanje.
632 CE: Umprofeti wama-Islam u-Muhammad uyafa. Kwiminyaka elandelayo, ukunyuka kwama-Islam kunye nokuncinci kwabaninzi kweYurophu kubangela ukutshutshiswa kakubi kwamaKristu kunye nokususwa kwazo zonke iintloko zamaKatolika ngaphandle kwabo baseRoma naseConstantinople. Ixesha lempikiswano enkulu kunye neengxabano ezihlala njalo phakathi kweenkolelo zamaKristu kunye namaSilamsi ziqala kule minyaka.
I-1054 CE: I-East-West imbonakalo enkulu ibonisa ukuhlukana ngokusemthethweni kwamaRoma Katolika kunye ne-Eastern Orthodox amasebe eKatolika.
I-1250s CE: I-Inquisition iqala kwicawa yamaKatolika-inzame yokukhusela iinkolelo zonqulo nokuguqula abangewona amaKristu. Iindidi ezahlukahlukeneyo zokufuna iingcinga ziza kuhlala zihlala iminyaka emininzi (kude kube sekuqaleni kwe-1800s), ekugqibeleni zijolise kumaYuda kunye namaSilamsi ukuguqulwa kunye nokuxosha abaphikisayo kwiCawa yamaKatolika.
1517 CE: UMartin Luther ushicilela i-95 Theses, eyenza iimbambano ezichasene neemfundiso zeCawa yamaRoma Katolika kunye nokuziphatha ngokucacileyo ukuqala kokuhlukana kwamaProthestani kwiCawa yamaKatolika.
1534 CE: UKumkani uHenry VIII waseNgilani uthi uyaba yintloko yeCawa yaseNgilani, eshenxisa iSonto lama - Anglican elivela kwiCawa yamaRoma Katolika.
1545-1563 CE: I-Catholic Counter-Reformation iqalisa, ixesha lokuvuselela kwimpembelelo yamaKatolika ekuphenduleni ukuguqulwa kwamaProthestani.
1870 CE: IQumrhu lokuqala leVatican lichaza umgaqo-nkqubo wePapal ukungalingani, ogcina ukuba izigqibo zikaPapa azigqithisi-ngokugqithiseleyo ziqwalaselwe lizwi likaThixo.
Ngama-1960 CE : IBhunga leBili leVatican kwinqanaba leentlanganiso liqinisekisile umgaqo-nkqubo wecawa kwaye yaqalisa amanyathelo amanyathelo ajongene nokulungiswa kweCawa yamaKatolika.
Amanqaku omhlobo e-intancedo Nceda Abasetyhini Benze Abahlobo Abatsha
UAlexander Omkhulu Imifanekiso
Hlangana neCat of 'SpongeBob SquarePants'
Ukuxhatshazwa kweMisipha kunye nokuxhalabisa ngeengxelo